Shirka Dalalka Khaliijka GCC oo ka furmaya Kuwait • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Shirka Dalalka Khaliijka GCC oo ka furmaya Kuwait
Shirka Dalalka Khaliijka GCC oo ka furmaya Kuwait
December 5, 2017 - By: Abdirizak Shiino
Maanta oo Salaasa ah ayuu furmayaa shirka sanadlaha ah ee ururka wadamada Khaliijka (GCC). Shirkan ayaa isha si gaar ah loogu hayaa maadaama uu yahay kii ugu horeeyey oo ay yeeshaan wadamadaasi tan iyo markii ay bilaabatay xiisada ka taagan dalalka Khaliijka.
Shirka Wasiirada Arrimaha Dibada ee horudhaca ah ayaa Isniintii ka shalay ka dhacay magaalada Kuwait, balse waxaa jiray dalal shirkaasi u soo diray wafuud heer hoose ah sida dowlada Imaaraatiga Carabta oo usoo diray shirkaasi Wasiirul Dawlaha Arrimaha Dibada, halka dalka Baxreyn uu mataleyey Wasiir kuxigeenka Arrimaha Dibada.
Wasiirada Shirkii shalay ka qeyb galay ayaa waxaa kamid ah Wasiirka Arrimaha Dibada ee Sacuudiga Adel Al-Jubeir iyo Wasiirka Arrimaha Dibada ee Qatar Mohamed Al Thani. Dalka Cumaan ayaa waxaa uga qeyb galay Wasiirkooda Yousef bin Alawi.
Ma jirin war rasmi ah oo laga soo saaray shirkii shalay oo ay Wasiiru yeesheen, waxaana si la isu weydiinayaa in Hogaamiyayaasha khaliijka ee shirka maanta imaan doona.
Dowlada Kuwait ayaa casumaada u dirtay dhamaan hogaamiyayasha dalalkaasi, walow illaa iyo hada ay xaqiijiyeen in ay imaan doonaan Emirka Qatar iyo wafdiga Cumaan.
Boqorka Sacuudiga ee Salman ayaa la hadal hayaa inuu shirka imaan doono walow aysan dowladaasi si rasmi ah u sheegin cida uga qeyb geli doonta shirkaasi.
Dowlada Imaaraatiga ayaa Axadii sheegtay in rajada laga qabo shirkan inuu wax xal ah u keeno xiisada Khaliijka ay aad u yartahay, hadalkaasi oo lagu baahiyey warbaahinta dowlada imaaraatiga.